ललिता निवास प्रकरणमा चर्चित अनुहारसहित १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, को–को छन् ? (सूचिसहित) - केन्द्र खबर
ललिता निवास प्रकरणमा चर्चित अनुहारसहित १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, को–को छन् ? (सूचिसहित)
२०७८ पुस १६ १६:४९
सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी हालसम्मकै चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । भाग्नसक्ने भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकाहरुको नाम खुलाइएको छैन ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदी सीआइबीको हिरासतमा छन् । शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमा ढकाल भने फरार भइसकेकी छिन् ।
यसैगरी, सीआइबीको खोजीमा परेपछि अख्तियारका पूर्व आयुक्त दीप बस्न्यात पनि सम्पर्कविहिन भइसकेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेको सडक र्दुघटनामा मृत्यु भइसकेको छ । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल देशभित्रै छन् । पौडेलबारे पक्राऊ पूजीृ जारी भए नभएको खुलेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसबाहेक थप व्यक्तिहरुबारे सीआइबीले थप अनुसन्धान गरेको हो । जसमध्ये १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइलहरुमै भागाभाग मच्चिएको छ । कतिपय हाइप्रोफाइल पक्राऊ रोक्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन् ।
सरकारले सुवर्ण शमशेर र उनका आफन्तको नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा लिएर २४ जेठ २०२२ मा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, २०४९ सालमा राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्ण शमशेरको १२ रोपनी जग्गामात्र राष्ट्रियकरण गरिएकोमा सबै राष्ट्रियकरण गरिएको देखाएर २०४९ मा जग्गाका भोगाधिकारीले आफ्ना नाममा पारेको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि २०४९, २०६२, २०६६, २०६७ र २०६९ मा किर्ते गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएवापत कर्मचारी देखि शक्तिशाली व्यक्तिहरुले २२ रोपनी जग्गा दामासाहीले बकस पाएको खुलेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त सञ्जय साहलाई पनि आरोपी ठहर गरेपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १७५ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेर ३२५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन । अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा २० अर्बको बिगो दाबी गरेको थियो । ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफतको मुद्दा दायर भयो । जसमा ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिव पनि परे ।
ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पहिलोपटक माधवकुमार नेपाल र दोस्रोपटक डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरुसँग बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको भनियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यो मुद्दाको अझै अन्तिम किनारा लागेको छैन ।